L'Oréal Extraordinary Oil - Hair Enhancer – SUNNY eSTORE
L'Oréal Extraordinary Oil - Hair Enha...
L'Oréal Extraordinary Oil - Hair Enhancer
L'Oréal ParisSKU: G3832700
100ml - 15,000 Ks50ml - 7,100 Ks
ပန်းခြောက်မျိုး၏ အဆီအနှစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဆံသားကို တောက်ပမှု ပေးစွမ်းနိုင် ပါသည်။
ဆံသားကို ပိုးသားကဲ့သို့ နူးည့ံပျော့ပျောင်းစေပါသည်။
ဆံသားကို လှပ သန်စွမ်း စေပါသည်။ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါသည်။
အဆီပြန်မှု မရှိဘဲ လျှော်ရလဲ လွယ်ကူပါသည်။
အေးမြ​ခြောက်​သွေ့ပြီး ​နေ​ရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်မထိ​သော ​နေရာတွင်ထားပါ
Enriched with6precious flower extracts
No stickiness and greasiness
How to use -Distribute 2-3 pumps onto palm and apply: 1. Before shampoo and conditioner to restore, nourish and prep hair for washing 2. On towel dry/ dry hair (before blow drying) to protect hair 3. Throughout the day for continuous nourishment and shine
Ingredients -6Precious Flower Oils: 1. Lotus 2. Tiare 3. Rose 4. Flax 5. Chamomile 6. Marticaria